Ndege yeRussia inopinda mugomo muTurkey ichiuraya munhu wese ari muchikepe
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Turkey Kuputsa Nhau » Ndege yeRussia inopinda mugomo muTurkey ichiuraya munhu wese ari muchikepe
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Ndege dzinoverengeka dzekudzimisa moto dzakatumirwa kuTurkey neRussia kuti ibatsire nyika mukurwa nemoto wemusango, uyo wakaunetsa svondo rapfuura.
Ndege yekuRussia yekudzimisa moto yarova muTurkey nhasi.
Ndege sezviri pachena haina kukwanisa kukwira kumusoro mushure mekurasa mvura pamoto wemusango.
Parizvino, hapana ruzivo nezve inogona kukonzeresa yekuparara yabuda.
Ndege yeRussia Beriev Be-200 yekudzimisa moto yakarova mugomo mudunhu reTurkey rekumaodzanyemba kweMarash nemugovera.
Wese munhu ari muchikepe amphibious Be-200 ndege- vatyairi vendege veRussia nevatungamiriri veTurkey - vaurawa.
Zvinoenderana neRussia Defence Ministry, paive nevashandi vashanu veRussia uye vakuru vatatu veTurkey vaive mundege.
Ndege yakadonha nguva pfupi yapfuura yaburitsa mvura pane imwe yehasha Moto weTurkey. Ndege iyi yainge isingakwanise kuwana kukwira kwakakwana mushure mekurasa mutoro wayo, ndokurovera mugomo.
Parizvino, hapana ruzivo pamusoro pechinogona kukonzera kukonzeresa chakabuda. Mauto eRussia akatotumira timu yevaongorori kuTurkey kuti vaongorore nzvimbo yakawirwa nenjodzi iyi.
Ndege shoma dzekudzimisa moto dzatumirwa Teki neRussia kubatsira nyika mukurwa kwayo ne mhirizhonga, iyo yakatambudza mumavhiki apfuura. Sekureva kwenhepfenyuro dzemuno, iyo Be-200 yakadonha yakabatanidzwa kune dhipatimendi reAdana rekudzimisa moto.